Redmi K30i ga - abụ 5G smartphone niile dị ọnụ ala Gam akporosis
Redmi K30i ga - abụ 5G smartphone niile dị ọnụ ala
Ọ na-abụwanye ihe a na-ahụkarị ịnwe ọhụụ ọhụrụ nke smartphones na njikọ 5G. A na-etinye usoro a dị ka iwu ọhụrụ, ọ bụ ezie na anyị ka na-aga n'ihu inweta ekwentị 4G maka ọtụtụ akụkụ, n'ezie, mana ọ bụ naanị n'ihi eziokwu na akụrụngwa 5G agbasabeghị na ụwa; Enwere obodo na obodo ole na ole nwere telekomunikashions a, ebe otutu kariri nwere 4G.
Industrylọ ọrụ ekwentị na-etinye aka na 5G. N'ọdịnihu dị nso, anyị ga-ahụ ọtụtụ ọnụ ahịa ndị ọzọ yana ụdị njikọta a. Chipsets dị ka Snapdragon 765G, Snapdragon 865, Mediatek Dimensity 1000 na Kirin 990, tinyere ndị ọzọ ka egosiri dị ka ndị kachasị iji nweta ọsịsọ dị egwu nke 5G. Otu n'ime ndị a kpọtụrụ aha ma ọ bụ ikekwe nhazi ọhụrụ bụ nke anyị ga-ede akwụkwọ na Redmi K30i, nke ga - abụ 5G nke dị ọnụ ala karịa ụbọchị, dị ka akụkọ na-adịbeghị anya; anyị ga-ekwu banyere nke a n'okpuru.
Redmi K30i ga - enweta ọnụ ala dị ọnụ ala na ngalaba mkpanaka 5G
Nke a ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịlele. Buru n’uche na egosiri ya n’ezie asịrị, ebe ọ bụ na ọ kwadobeghị ịdị adị nke Redmi K30i. Ọ bụ ụfọdụ ndị mgbasa ozi China nke gosipụtara ya dị ka otu n'ime smartphones ndị na-esote n'ahịa.
O doro anya Redmi K30i ga - abụ ekwentị mkpanaaka nwere njirimara na nkọwapụta teknụzụ dịka nke achọtara na Redmi K30 mbụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ àgwà dịtụ mma iji dozie ha na njikọ 5G ma si otú a na-enye ọnụahịa dị ala.
A na-ekwu na ọ ga-efu ihe ruru yuan 1,799. N'okwu ahụ, ya mba price ga-abụ ihe 235 euro ma ọ bụ 255 dollars. Agbanyeghị, enwere ike iwepụ ya na Redmi Note 9, nke a ga-akwụ ụgwọ ya na 1,599 yuan (~ 208 euro ma ọ bụ $ 225) ma hapụ ya na June.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi K30i ga - abụ 5G smartphone niile dị ọnụ ala
Oppo A72: Ngwaọrụ ọhụrụ nwere 6,5 "panel, Snapdragon 665 na ColorOS 7